Vaovao - Tadiavo ny Plywood Birch
Birch Plywood dia plywood mafy kalitao avo lenta vita amin'ny veneers maro mba hampitombo ny fahamarinan-toerana ara-drafitra ary manolotra endrika endrika avo lenta.Izy io dia vita amin'ny sosona maro be misy veneers manify, miraikitra amin'ny zoro havanana.Izy io dia manana toetra ara-batana sy mekanika tena tsara ary endrika miloko marevaka, miaraka amin'ny endrika malefaka.
Tsy mitovy amin'ny plywood nentim-paharazana mety ho zatra mahita ny fototry ny baltic birch: ny soson'ny plies ao anatiny dia 1,5 mm ny hatevin'ny hazo birch veneer, cross-bandy, ary laminated amin'ny endrika ivelany lakaoly.
Anarana botanika: Betula Alleghaniensis
Anarana iombonana: Birch mafy, Birch volafotsy, Birch Baltika, Birch Rosiana ary Birch honahona
Loharano: Mitombo any Eoropa.
Endriky ny endriny: voamaina mahitsy miaraka amin'ny tora-kofehy tsara.Kitapo volontsôkôlà mena mena sy sapwood mavo mavo.
Toetra ara-batana: mavesatra, mafy, matanjaka ary henjana.Fihetseham-po mahery vaika, hery miforitra ary miforitra.Steam-miforitra tsara.Manana fahamarinan-toerana ambany sy fanoherana ny lo.
Toetra fiasana: Masinina tsara nefa somary sarotra ny miasa amin'ny fitaovana tanana.Ny fandavahana mialoha dia ilaina amin'ny fametahana na fantsika.Glues, tasy ary vita tsara.
Fampiasana: Toetran'ny fihodinana tena tsara - ampiasaina amin'ny spools, bobbins, shuttles, dowels, vilia baolina, sns. Tena sarobidy amin'ny plywood, takelaka, fanaka ary kabinetra.Fampiasana hafa boaty, harona, kojakoja hazo, cooperage, gorodona, vita amin'ny atiny, varavarana, fitaovana ary zavamaneno.
Fotoana fandefasana: Jun-07-2022